Iingcamango zeKhadi leKrisimesi ze-DIY ezenziwe ngezandla Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iingcamango zekhadi leKrisimesi ze-DIY
UJudit Murcia | | Ukuphefumlelwa, Ezahlukeneyo
Rhoqo iKrisimesi siyayifumana iiposikhadi zivuyisana nekrisimesi. Kuyinyani ukuba oku isiko lilahlekile okanye lavela ngokufika entsha ubuchwephesha.
Sifuna ukukukhuthaza ngezimvo ezininzi ukuze Uyakhuthazwa ukuba wenze owakho ukuvuyisana yeKrismesi. Intwana encinci ye ukucinga, ixesha kunye nokungaqondi ungangoyena ndoqo kusapho okanye kubahlobo.
1 Iiposikhadi ezenziwe ngezandla
2 Sebenzisa umzimba wakho
3 Amakhadi eposi anamaqhosha
4 Iiposikhadi ezinekhadibhodi
5 Iingcamango ezingakumbi ngekhadikhadi
6 Amakhadi epostadiweyo
7 Ngaba uyayazi iteyiphu yeWashi?
Iiposikhadi ezenziwe ngezandla
Qalisa ukusebenza uyeke ubuchule bakho buphaphazele ukwenza amakhadi eKrisimesi enziwe ngezandla. Kungumsebenzi olungileyo wokwenza nabantwana abancinci endlwini. Entle Isicwangciso sangecawe! Ufuna nje inkuthazo encinci kunye nezinto onokuzisebenzisa kwakhona ekhaya. Zezobugcisa obaziwayo obubizwa ngokuba yi-DIY (yenze ngokwakho), uguqulo "lwenze ngokwakho".
Sebenzisa umzimba wakho
Umzekelo wokuqala esifuna ukukubonisa ulula kakhulu, uya kufuna kuphela ipeyinti, iziphawuli okanye ezinye izinto ezidayayo kunye umzimba wakho. Ufunda ngokuchanekileyo, umzimba wakho. Siya ku yenza iiKrisimesi ii icon ngokuprinta, izandla okanye iinyawo zethu.
Makhe sibone imizekelo:
Njengoko sinokubona emfanekisweni, ezi Ixhama banjalo yenziwe ngeminwe ndiyapeyinta. Emva kwexesha, xa yomile, siya kutsala amehlo, iindlebe kunye neempondo. Siza kuhamba nomzobo wethu ngombhalo wokuvuyisana kunye ... lungele!
Con ipeyinti yemibala eyahlukeneyo kunye neenyawo zethu siza kwenza oko kuya kuba ziibhalbhu zeKrisimesi Xa somile siya kubajoyina ngomgca ongagunyaziswanga ukunika intambo.
Olunye ukhetho kukusebenzisa yonke Intende yesandla kwaye ubuchule bethu mabubhabhe. Njengakwimizekelo yekhephu etsaliwe, sinokwenza amadoda azizilumko, uSanta Claus okanye abanye abalinganiswa emkhombeni.
Amakhadi eposi anamaqhosha
Olunye ukhetho kukuba ziphinde zisetyenziswe izixhobo kunye nezinto esinazo ekhaya ukwenza iiposikhadi zethu. Kule meko, sicebisa ukuba ukhuphe ibhokisi yokuthunga kwaye usebenzise zonke ezo zinto botones ngaphandle kweqabane esiligcina ngaphandle kwentsingiselo.
Sebenzisa amaqhosha? Zininzi iindlela zokuzibandakanya kuyilo lwethu. Makhe sikubonise ezinye imizekelo, ngokuqinisekileyo bayakukhuthaza ukuba uzenzele eyakho indalo.
Njengoko ubona, banokwenza iifayile umlinganiswa omnye ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, nganye kuzo inomtsalane. Vumela umbono wakho ubhabhe kwaye usebenzise izixhobo onazo ngendlela efanelekileyo. Ezi Umntu weqhwa yenziwe nge botones zilula kakhulu ukuzenza kwaye iziphumo ziyinyani yokuqala.
Sinokusebenzisa i amaqhosha afana noonobumba. Kule meko, "ho ho ho" ibhaliwe, i-onomatopoeia eyenziwa nguSanta Claus xa ehleka. Unobumba "o" utshintshwe ngeqhosha. Ingcinga elula kakhulu kodwa isiphumo sihle kakhulu.
Imihombiso yeKrisimesi, iibhola esizixhoma emthini zimelwe ngamaqhosha emibala eyahlukeneyo. Ngokukhawuleza, kulula kwaye inemibala!
Las ikhadi lekhadibhodi Unokuba ngumlingani wethu onamandla okwenza ngakumbi profesional Iiposikhadi zethu zekrisimesi. Nathi yonga ixesha elininzi imibala. Nika ingqalelo ukuba kukho izimvo zokumisa uloliwe.
Con amakhadi amathathu ngemibala eyahlukeneyo, inye onke amalungu omzimba unokufumana imimangaliso yokwenyani. Le Santa Claus inomdla yenziwa kunye:
Ikhadibhodi ebomvu: umnqwazi.
Umbala wenyama yekhadibhodi: Ebusweni.
Ikhadibhodi emhlophe: Ezantsi komnqwazi kunye neendevu.
Kufuneka nje qhekeza zonke iziqwenga kubukhulu ocinga ukuba bufanelekile, iqhinga kukuba imiphetho idlakadlaka. Ncamathelisa kwaye kamva zoba impumlo namehlo. Kulula kakhulu!
Njengoko sibona emfanekisweni, sinokufikelela kwi- Umntu weqhwa kwintaka yamehlo ngendlela elula kakhulu. Ukuba sihlalutya indlela eyenziwe ngayo le khadi leposi, siyaqonda ukuba kulula kakhulu ukufezekisa iziphumo ezilungileyo. Kufuneka sika amanqanaba amathathu oobukhulu obahlukeneyo. Siza kusebenzisa ikhadi elimhlophe. La macandelo aya kuba ngumzimba wekhephu. Siza kuyidweba kwaye siyinqumle impumlo, i iingalo kunye yesikhafu. Eminye siza kuyilanda ngesiphawuli esimnyama: amehlo nomlomo.
Ukuba sijonga i Elona nqanaba liphezulu lokuqhubekeka, Sikubonisa olu luhlu lwee-postcards ezifuna ixesha kunye nokulandelwa. Ungaqwalasela ukwenza iikhadikhadi ezininzi zefayile ye- iimodeli ezahlukeneyo. Ngale ndlela, abahlobo bakho, umzekelo, baya kubona ukuba ngamnye kubo unemodeli eyahlukileyo. Yindlela yokubonisa ukuba yinto enkulu ngakumbi ngokobuqu kwaye baya kuyibona nangakumbi inkohliso.
Ezi postcards zimele abalinganiswa abohlukeneyo ezisifaneleyo Imihla yeKrisimesi:
Santa Claus, Umntu waseMelika oza kwilizwe lethu ukuba azohlala. Samkele eli siko iminyaka emininzi ngoku.
Reno, sisilwanyana esitsala isileyi sikaSanta.
Ipenguin, Ebhekisa kubanda basebusika.
Umntu weqhwa. Ikwabhekisa kubanda nakwikhephu.
Iingcamango ezingakumbi ngekhadikhadi
Kukho uluhlu olubanzi lweembono, sicebisa ezinye zazo:
Los Amadoda amathathu alumkileyo.
Umboniso wokuzalwa kukaYesu eBhetelehem.
ICamellos, izilwanyana kule meko zihamba nezazi ezithathu ezilandela inkwenkwezi yokudubula.
umthi wekrisimusi. Singayihombisa ngezinto ezininzi ezinjengeebhola, izibane kunye neenkwenkwezi.
Malume kaNadal okanye icagatió, isithethe sesiCatalan.
Phakathi kwezinye iindlela ezininzi.
Esona sisindululo sokuqala kukuba ukwenza ii-postcards zethu. Okokuqala, kufuneka ichaphaza Ikhadibhodi. Ngamachaphaza siya kuzobeka imilo esifuna ukuyilungisa. Siya kuyenza le nto yokuhombisa kwikhadibhodi, ke ngoko, kufuneka silumke kakhulu ukuba singaphuli inkxaso.
Inyathelo lokuqala lokuthatha yile uyilo lwethu. Singayenza ngesandla okanye sijonge kwi-intanethi kwaye siyiprinte. Sicebisa ukuba ibe umzobo olulange imigca embalwa kwaye ezi zezi Yahlulwe phakathi kwabo. Isizathu silula kakhulu, kuba ukuba imingxunya ikufutshane enye nenye inokukrazula xa isiwa.
Cola umfanekiso nge tape kwi Inxalenye engaphambili wekhadi, apho ufuna ukubeka khona umzobo. Umngxunya ophawula ukumila koyilo. Emva kwexesha, susa iphepha kwaye ungaqala ukuloba. A iqhinga ukwenza imingxunya ngaphandle kokonakalisa ikhadibhodi kukuba nayo inkxaso ethambileyo ngezantsi. Ungasebenzisa i-cork, i-polystyrene, i-eraser okanye nayiphi na into enezimpawu. Gcina umgama omncinci phakathi 3 no 5 milimitha phakathi komngxuma Ukuthintela ukuba ingaphuli.
Ngaba uyayazi iteyiphu yeWashi?
Singasebenzisa iintlobo ezininzi zezinto zokwakha, kwaye kwiminyaka embalwa edlulileyo iteyiphu yewashi. Zimalunga iiteyiphu zokuncamathela ezinemibala yokuhombisa kunye nemibala.
Siza kuba nakho ukwenza amakhadikhadi apholileyo kakhulu ngekhadibhodi, isiphawuli kunye neteyiphu yewashi. Singabafumana ixabiso eliphantsi kakhulu, ngakumbi ukuba siyathenga Iipakethi nge-Intanethi. Sishiya ikhonkco apha ukuba kunokwenzeka ube nesibindi sokuthenga le nto.
Siqala nge umthi wekrisimusi. Njengoko ubona, kulula kakhulu ukuyenza, sifuna imibala emininzi kuphela. Siza kusika imitya ukusuka kubukhulu ukuya kubufutshane kwaye siya kuyincamathelisa.
Njengoko sibona kumfanekiso ongentla, sinokwenza izakhelo nge-washi tape kwaye sibhale nantoni na esiyifunayo embindini. Singakhangela izimvo ze zokubhala ukufumana izimvo zokwenza iileta ezipholileyo. Izinketho azipheli!
Qhubeka wenze amakhadi akho eposi kwaye ngaphezulu kwako konke ...IKRISMESI EMNANDI!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iingcamango zekhadi leKrisimesi ze-DIY
Ukufota ngaphakathi komlilo waseCalifornia
Le Freixenet yeKrisimesi ayinazo iibhabhu ezaziwayo